Home » Warbixin Caafimaad oo bilaash ah
2. 3 "Caafimaad" Cuntada Inaad Jooji Cunnaanta Maanta! (warbixinta cusub)
Waa arrin macquul ah tan iyo markii loo yaqaan "caafimaadka" ayaa la soo saaray tobankii sano ee ugu dambeeyay 2, Maraykanku way jiran yihiin iyo dufan ka badan sidii hore. Waa maxay sababta tan? Ma jiraan waxyaabo aanad aqoonin? Dhowr usbuuc ka hor saaxiibkeena Yuri Elkaim, oo ah nafaqeeye nafaqo leh oo caalami ah ayaa go'aansaday in uu sameeyo cilmi baaris ku saabsan cuntooyinka caafimaadka loo yaqaan. Waxa uu u soo baxay si uu u ogaado runta. Maxaa ogaaday inuu ahaa mid naxdin leh !! Inta badan cilmi-baaristii uu u soo gudbiyay waxaan horey u ogaanay, hase yeeshee wuxuu ogaaday macluumaad cusub oo la yaabay. Warbixintan caafimaad ee TANF oo cajiib ah, Yuri wuxuu cadeeyaa cuntooyinka 3 "caafimaadka" ee aad joojisid cunitaanka ilaa maanta!
3 Cuntada Caafimaadka ee Jooji Cunitaanka <---- BILAASHA BILAASH AH (PDF)
Warbixinta caafimaadka ee bilaashka ah ayaa sidoo kale waxaa sameeyey Yuri Elkaim. Warbixintan TUSMADA BILAASHA, wuxuu ka hadlayaa xakamaynta 5-ga ee looga hortago. Warbixintan ayaa ka hadlaysa:
5 Xakamaynta Detox <---- BILAASHA BILAASH AH (PDF)